७७ वर्षअघि काठमाण्डाैमा हिउँ पर्दा...
असोज ५ गते नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा भैरव अर्यालको जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने गरिन्छ ।
वि.संं १९९३ असोज ५ गते ललितपुरको कुपण्डोलमा जन्मिएका अर्यालले केबल ४० वर्षको उमेरमा २०३३ साल असोज १९ गते देहत्याग गरेका थिए । अर्यालका जयभुँडी, काउकुती, इतिश्री, दश अवतार, गलबन्दी, उपवन लगायतका कृतिहरू लोकप्रिय छन् । उनी कवि, निबन्धकार, समीक्षक, समालोचक, गोरखापत्र दैनिकका उपसम्पादक का रूपमा परिचित अर्यालले गोकर्णस्थित बाग्मती नदीमा फाल हालेर देहत्याग गरेका थिए ।
विसं. १९९३ असोज ५ गते ललितपुरको कुपन्डोलमा जन्मिएका अर्यालको पारिवारिक अवस्था सुखद थिएन । उनका दाजुभाइ चार जना थिए । त्यसमध्ये जेठा थिए उनी । बाबु प्रहरीमा लेखापालको सामान्य जागिरे थिए । खेतीपाती नभएकाले उनको परिवार बसाइ सरेर जोरपाटीस्थित दक्षिणढोका पुग्यो । दक्षिणढोका गएपछि पनि उनीहरूको पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुध्रिएन । त्यसैबीचमा जन्मिए तीन छोरा र तीन छोरी ।
दरबार हाइस्कुलबाट माध्यामिक तह सकाएका अर्यालले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक निजी शिक्षालयबाट उत्तीर्ण गरे । २०२६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए सिध्याए ।
सानैदेखि मुक्तक र हाँस्यविधामा लेख्न रुचाउने अर्यालले जीवनको केही समय अध्यापन पनि गरेको उनका छोरा दीपक अर्याल बताउँछन् । “पारिवारिक दायित्व उठाउन पिताजीको १२ वर्षको कलिलै उमेरमा विवाह भयो,” दीपक भन्छन् ।
गोकर्णस्थित अर्याल गाउँका बद्रीनाथ आचार्यको डेरामा उनकै भान्छे भएर मध्यमा सके । सुरुमा संस्कृत पढेका हुन् उनले । मध्यमा परीक्षाको फर्म भर्न पैसा नभएपछि उनले जुक्ति निकालेछन्– तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चिठी लेख्ने । उनले विन्तीपत्र लेखेर दरबार पठाएछन् पनि । कवितात्मक भावमा पत्र लेखेर पठाएपछि महेन्द्रले पढाइको शुभकामनाका साथै केही रकमसमेत पठाएको उनका सहपाठी बल्लभमणि दाहाल बताउँछन्।
साँखुको विद्यालयमा पढाउँथे उनी । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य साँखुबाट काठमाडौं फर्कंदै थिए । त्यहीबेला अर्यालले विद्यार्थी लिएर बाटो छेक्दै पञ्चायत* सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेछन् । विद्यालयमा भवन र वेन्च नभएको गुनासो सुनाउँदै माग पूरा गर्न बाध्य बनाएछन् । त्यही घटनापछि उनलाई जोरपाटीतिर कम्युनिस्ट भन्न थालिएछ । तर, उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता भने कहिल्यै लिएनन् ।
यता पारिवारिक दायित्व पनि बढ्दै थियो, उता साहित्यक क्षेत्रमा उपस्थिति सशक्त बन्दै थियो । त्यस्तैमा उनले प्राथमिक तहसम्म पढाउने सामान्य तालिम लिए । तालिमपछि २०११ सालमा उनी कास्कीको कन्धनी डाँडा (हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ५) मा पढाउन गए । उनलाई त्यहाँ पुर्याउन भूमिका खेलेका थिए– नारायणदत्त रानाभाट र रसमोहन शर्माले । नारायणदत्त पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटका पिता हुन् । आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पढाउन पाइने र गाउँका अन्य बालबच्चाको पनि शैक्षिक भविष्य उज्वल हुने सोचेर नारायणदत्त र रसमोहनले अर्याललाई पोखरा झिकाएका थिए ।
त्यतिबेला भर्खर गाउँमा विद्यालय खोलिएको थियो । काठमाडौंबाट पढाउन पुगेका थिए अर्याल । उतिबेला नेपालबाट पढाउन आएको भनेपछि सम्मानै बेग्लै हुन्थ्यो । अर्यालले मानमनितो पाउने नै भए ।
पूर्वसभामुख रानाभाट उनलाई सरल र सरस व्यक्तित्वका धनी मान्छन् । उनी पनि अर्यालका प्रिय विद्यार्थी थिए । भन्छन्, “मैले जीवनमा जे–जति शिक्षा हासिल गरें, त्यहो भैरव अर्यालले नै बसाइदिएको जग हो ।”
त्यतिबेला गुरुकुल शिक्षा पद्धति थियो । दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तसती चन्डी आदि पठनपाठन हुन्थ्यो । तर, अर्यालले अंग्रेजी पठनपाठन सुरु गरे । रानाभाट सम्झिन्छन्, “हामीलाई अंग्रेजीको बाटो देखाउने नै उहाँ हो ।”
रानाभाटकै घरमा बस्थे अर्याल । बाह्मण भएकाले उनी रानाभाट परिवारले पकाएको खाना खाँदैनथे । त्यसैकारण उनलाई भात पकाएर खुवाउने जिम्मा त्यहीँका एक विद्यार्थीलाई दिइएको थियो ।
पठनपाठनका अतिरिक्त अर्यालले प्रत्येक साता बालसम्मेलन आयोजना गर्थे । विद्यार्थीहरूलाई कविता, मुक्तक सिर्जना गर्न लगाउने र वाचनसमेत गर्न अभिप्रेरित गर्थे । निकै छोटो समयमा उनी विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय भए । र, गाउँलेका पनि प्रिय बन्न पुगे ।
प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार उनका रचना र गफ सुन्न गाउँलेहरू भेला हुन्थे । त्यसबाहेक उनले गाउँलेहरुलाई अन्य विषयमा पनि आफ्ना कुरा भन्थे । रानाभाट १०–११ वर्षमात्रै भएकाले बुझ्ने कुरै भएन ।
आफ्ना हाँस्यव्यंग्य रचनाहरुले उनी गाउँलेलाई मन्त्रमुग्ध पार्थे । काठमाडौं आएका बेला टन्न पुस्तक जम्मा पार्ने र वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत पनि गर्थे उनी ।
विद्यार्थीलाई सिक्न जति उत्साहित बनाउँथे, दण्डमा पनि उत्तिकै कडा थिए भन्छन् रानाभाट । “पढ्न अल्छी गर्ने र आनाकानी गर्ने विद्यार्थीलाई कुद्दै डाँडा चढ्न लगाउने र कुद्दै ओरालो झर्न लगाउनुहुन्थ्यो,” उनले सम्झिए ।
त्यतिबेला दुःखद् घटना भयो । शुक्रबारको दिन थियो । आधा दिनमात्र पठनपाठन हुन्थ्यो । केहीबेर बालसम्मेलन चल्थ्यो । सम्मेलनमा कविता, मुक्तकलगायत आ–आफ्ना रचना वाचन गरेपछि केही विद्यार्थीले निधो गरे– खोलामा पौडी खेल्न जाऊँ ।
त्यसमा सहमत नहुनेहरू घरतर्फ लागे । रानाभाटलगायत ८–१० विद्यार्थी स्थानीय विजय खोलामा पौडी खेल्न थाले । उनीहरूसँगै थिए अर्याल पनि । आत्मीयताले हो या आफ्नो दायित्व सम्झेर, अर्यालले विद्यार्थीलाई स्वच्छन्द छाड्दैनथे ।
सबै विद्यार्थी खोलामा रमाइलो गर्दै थिए । तर, अचानक एक विद्यार्थी गायब भए । तलतिर खेल्न गयो होला भन्ठानेर उनीहरूले खासै वास्ता गरेनन् । घर हिँड्ने बेलासम्म पनि नआएपछि उनीहरूको मनमा चिसो पस्यो । खोजतलास गर्न थाले ।
केही बेरपछि उनी पानीमा तैरिरहेका भेटिए । भेटिनुअगावै उनको प्राणपखेरु उडिसकेको थियो । त्यो घटनाबाट अर्याल निकै विक्षिप्त भए । ती उनका प्रिय शिष्य थिए । बलबहादुर रानाभाट थियो उनकाे नाम । “उनको निधन भएपछि अर्याल गुरु निकै विह्वल बन्नुभयो, प्रिय विद्यार्थी गुमाउनुपर्दाको चोट मस्तिष्कमा गहिरो गरी पर्यो । त्यसपछि उहाँ हाम्रो घरमा बस्न पनि छाड्नुभयो,” रानाभाटले स्मरण गरे ।
केही समय रसमोहन शर्माकहाँ बसे र त्यसपछि पोखरा छाडे । काठमाडौंकै इन्द्रायणी प्राविमा सरुवा भए । उनले पोखरामा डेढ वर्ष समय बिताए ।
पोखरा छाड्ने सहायक कारण पनि थियो– लुतोको महामारी । त्यसबेला कन्धनी डाँडामा लुतोले आतंकै मच्चाएको बताउँछन् रानाभाट । “अचानक जिउ चिलाउन थाल्ने र पछि खटिरा निस्केर पाक्ने हुँदा हामी निकै भयभित भएका थियौं,” उनले भने, “हामीलाई मात्र नभएर अर्याल गुरुको शरीरमा पनि खटिरा आएको थियो ।”
काठमाडौं गएपछि पनि उनको मन पोखराबाट हटेन । र त, पोखराका आफ्ना विद्यार्थी र गाउँलेलाई सम्बोधन गर्दै उनी बारम्बार चिठ्ठी लेखिरहन्थे । रानाभाट भन्छन्, “हाम्रो घरमा खाएको मकै भटमास, मोही, पुवालगायतका खानेकुरा सम्झिएर र यहाँको आत्मीयताबाट आह्लादित भएर उहाँले पटक–पटक पत्रसमेत कोर्नुभयो ।”
साँखुको इन्द्रायणी प्राविमा सरुवा भएपछि उनको अध्यापन लामो समय रहेन । त्यसपछि उनी ‘हालखबर दैनिक’मा आबद्ध भएर पत्रकारिता सुरु गरे । सुरुमा सहयोगी भएर पत्रिका छिरेका अर्याल पछि त्यसैको सम्पादकसम्म भए । त्यहाँ उनले तीन वर्षजति काम गरे । त्यसपछि ०१८ मा ‘गोरखापत्र’ छिरे । संसार नछाड्दासम्म उनले ‘गोरखापत्र’मा काम गरे । मृत्यु हुँदा उनी ‘गोरखापत्र’का उपसम्पादक थिए । सम्पादक थिए– केशवराज पिँडाली ।
साहित्यक क्षेत्रमा उनले २००९ सालमै पदार्पण गरेको अभिलेखहरूले देखाउँछन् । ‘नयाँ जीवन’ शीर्षकको कविता रचेर उनले काव्यिक फाँटमा पाइला टेकेका हुन् । तीन दशकको सिर्जना यात्रामा कविता, निबन्ध, समालोचनाका गरी एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक छापिएको बताउँछन् रोचक घिमिरे । त्यसो त घिमिरेले नै उनलाई साहित्य सिर्जनामा ओत दिएका हुन् । लामो समय टंगालस्थित उनकै घरमा बसे अर्याल । घिमिरेलै घण्टौं कोठामा थुनेर निबन्ध लेख्न लगाएको र लेखुन्जेलका लागि चुरोटदेखि खानासम्मको प्रबन्ध आफैं मिलाइदिएका अनेक किस्सा सुनाउँछन् उनी । उनको पहिलो हाँस्यव्यंग्य संग्रह ‘काउकुती’ हो । यो बासुदेव शर्माले प्रकाशन गरेका थिए । उनले पछि हाँस्यव्यंग्यमात्रै छाप्ने ‘कौवा प्रकाशन’ खोलेका थिए । अर्यालका रचना छापेरै कौवा प्रकाशनले तहल्का मच्चाएको थियो उतिबेला ।
साहित्य साधना, शिक्षण र पत्रकारिता मार्फत जीवनको उतार–चढाव बेहोरेका अर्यालमा घाँटीको समस्या देखा पर्यो । नेपालमा उपचार राम्रो नभएपछि उनी जर्मनीसम्म पुगे । तर, त्यहाँ पनि उनको उपचार राम्रो भएन । त्यसपछि उनमा निराशा पैदा हुन थालेको छोरा प्रकाश बताउँछन् । “उपचार गराउन उहाँ जर्मनी जानुभयो तर त्यहाँ पनि राम्रो उपचार नभएर हो या अन्य गडबडीले– बोली धोद्रो सुनिन थालेको थियो,” उनले भने ।
विभिन्न मञ्चमा कविता पढ्न जाँदा, गोष्ठीहरूमा सहभागी हुँदा स्वर ननिस्कने समस्याले उनीमा हीनभाव पैदा हुँदै गएको थियो । १६ वर्षकै उमेरदेखि उनलाई त्यो रोग लागेको रहेछ । बाेल्दा बाेल्दै असह्य पीडा हुँदा उनी हातले घाँटीका नशा थिचेर पनि रचना वाचन गर्थे ।
यता नोकरीबाट पनि उनी सन्तुष्ट थिएनन् । उनका समकक्षीहरू सबैको पदोन्नति हुने तर आफ्नो नहुने तनावबाट उनी प्रताडित हुँदै गएको नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन् ।
उनीभित्र साहित्यको अथाह प्रतिभा थियो । खुम्च्याएको थियो– सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले । उनले व्यंग्य लेख्थे । राजनीति र तत्कालीन सत्ताप्रति तीब्र घोचपेच गर्थे तर बुझ्नेको जमात कति नै थियो र ! बरु खिसिट्युरी गर्नेहरु निस्किए । तिनले कुनै न कुनै कोणबाट उनलाई खुइल्याइरहे । दपेटिरहे ।
त्यसपछि उनमा जीवनप्रतिको निराशा झनै झांगियो । उनले निर्णय लिइसकेका रहेछन् । कहिलेकाहीँ छोराहरूलाई भन्दा पनि रहेछन्– म मर्छु अब, तिमीहरू गरिखाओ ।
साना छोराहरु रुँदै भन्थे, “तपाईं मर्नुभयो भने हामी कसरी बाँच्ने ? नमर्नुस् न बा !”
नियति अझै निर्मम बन्यो । ०३३ को दसैंको द्वादशी मध्यरात उनले घर छाडे । सँगै सुतेका थिए माइला छोरा प्रकाश । तर, उनले सुइँकोसमेत पाउन सकेनन् । बाबु हराएपछि छोराहरू रोइकराइ गर्न थाले । साथीकहाँ गए कि भन्ने पनि पर्यो । मध्याह्नसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारको मनमा चिसो पस्यो । सारासंसार खोजे, कतै भेटेनन् । ३ दिनपछि बागमती नदीमा उनको शव फेला पर्यो । नाबालक छोराछोरीले पितृवात्सल्य गुमाएनन् मात्रै, देशले साहित्यको अग्रपुरुष गुमायो । आफू रोएर पनि अरुलाई हँसाउने अर्याल अन्ततः सबैलाई रुवाएर बिदा भए ।
छोरा प्रकाश भन्छन्, “दसैं सबै परिवार मिलेर राम्रैसँग मनाएका थियौं तर आकाशमा पूर्ण चन्द्र लाग्न दुई दिन बाँकी रहँदै हामीले जीवनमा औंसीको रात बेहोर्नुपर्यो ।”
त्यसो त उनले आत्महत्याका लागि पटक–पटक प्रयास गरेका रहेछन् । कहिले झ्यालबाट समेत हाम फाल्न खाेज्ने त कहिले कोटको खल्तीमा विषका चक्की फेला पर्थे । यस्ता व्यवहारले परिवार आजित थियो ।
परिवारले सुनेसम्म मृत्युअघि अर्यालले गोकर्णस्थित महादेव मन्दिरका जोगीसँगै बसेर चुरोट खाएका थिए । त्यतिबेला राति १२ बजेको थियो । मध्यरात चुरोट खान आएको देखेर जोगी अचम्मित भएका थिए रे ! जोगीसँग छुट्टिएलगत्तै उनले पुलबाट खोलामा हाम फालेछन् । जोगीले छप्याल्याङ्ग गरेको आवाजसमेत सुनेका थिए रे ! मृत्युका सन्दर्भमा जे–जस्तो हल्ला चले पनि उनको परिवार निश्चित छ– अर्यालको मृत्यु आत्महत्या हो ।